Yamkela i-HONGSBELT® yokuthutha iimveliso zezolimo. Ngenxa yeemveliso zezolimo ziya kuqhoboshela isanti nomhlaba omninzi; i-grit ilula ukugqoka kunye nokusika ubuso bebhanti. Ubomi be-HONGSBELT® buya kuba ngamaxesha e-10 ngaphezu kwebhanti ye-PVC ngelixa kusetyenziswa kwindawo yokuthutha iimveliso zezolimo.
I-HONGSBELT® inendawo evulekileyo ephakathi kunye nekhono elihle lokucoca; inokwanela imo engqongileyo yokuntywila ukukhupha iintshulube kunye namaqanda ezinambuzane. Ubukhethekileyo bokuqina okuphezulu kunokuvumela i-HONGSBELT® kuphela ukuba yenze amanqaku e-2 ukubamba injongo, kwaye inokufikelela kwisiphumo sokuhanjiswa okuthambekileyo kwinqanaba.
Umphezulu webhanti awuyi kugoba kwaye uphuke ngelixa ubambe phantsi kumacala omabini. Ukuncedisa ngoyilo lwendiza kwibhanti kwaye inokuthutha iimveliso ezithambekele kuzo naziphi na ii-angles ngokuchanekileyo ngaphandle kweempazamo.
Zonke iimveliso ze-serial ze-HONGSBELT® zamkela izinto ze-FDA; I-HONGSBELT® iya kuba lolona khetho lwakho lulungileyo kwinkqubo yokuthutha ukutya okanye ezinye iimveliso. Iinzuzo ezininzi kunye neenkcukacha malunga nabathumeli be-HONGSBELT®, nceda ubhekisele kwezinye iinkcazo kwesi sahluko.